CopyTrans Manager: Music Transfer in iPod / iPhone / iPad aan Lugood
CopyTrans Manager - Music Transfer in iPod / iPhone / iPad aan Lugood
> Resource > Transfer > CopyTrans Manager - Music Transfer in iPod / iPhone / iPad aan Lugood
Hawlaha Manager CopyTrans sida a Lugood Library yar iPhone. Waa freeware ku qortid music si toos ah iPod, iPhone, iPad ama aan Library Lugood ah. Waa a, dacwana qalab loogu talo galay dadka daasho isticmaalka Lugood Library si hagaagsan music qalabka Apple. Ka sokow gelinaya music qalab Apple, CopyTrans Manager saamaxaya kuwa isticmaala si ay u abuuraan iyo edit playlists, tirtirto heeso iyo muusig.
Waxaan isku dayay Maareeyaha CopyTrans. Marka aad soo bixi uga goobta rasmiga ah, rakibo ma aha oo kaliya Macalinka CopyTrans. Waxaa ka mid ah dhammaan waxyaabaha taxane CopyTrans. Marka aad u baahan tahay si ay u isticmaalaan Manager CopyTrans, kaliya waxaa guji Control CopyTrans Center.
Tababare CopyTrans waa fiican in ka computer ah wareejiyo music in iPod, iPhone, iPad iyo tababare music. Si kastaba ha ahaatee, sida dadka isticmaala iPod, iPhone, iPad ama, qalab ah oo dhameystiran oo qalab Apple waa kale oo muhiim ah oo waxtar leh, gaar ahaan marka aad u baahan tahay in gurmad aad music ka iDevice ah si aad u computer si Lugood Library.
Haddii aad door bidi lahaa qalab sameyn kara waxa CopyTrans Manager sameeya iyo in la siiyo fursado dheeraad ah, waxaan idinku talinaynaa Wondershare TunesGo . Ma aha oo kaliya ka caawisaa in aad nuqulka wax song iyo video in iPod, iPhone, iPad iyo, laakiin sidoo kale taageeray ilaa heesaha oo dhan, videos, iyo sawiro ka qalabka kombiyuutarka iyo maarayn songs, playlists, videos, sawiro, albums sawir ku saabsan qalabka aad. Eeg sida loo isticmaalo.
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad free hoose si aad u leeyihiin isku day ah. Tababare CopyTrans ma laha version ah Mac. Haddii aad u baahan tahay Manager CopyTrans ah Mac, download Wondershare TunesGo (Mac) .
Tallaabada 1. Connect iPod, iPhone, iPad ama la your computer
Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPod, iPhone, iPad ama la your computer iyo abuurtaan TunesGo Wondershare. Ka dibna waxaad arki kartaa qalab aad waxaa la soo bandhigay uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Maamul music, videos, iyo sawiro
Laga soo bilaabo uu furmo suuqa ugu weyn, waxaad riixi kartaa "Si Lugood" in aad nuqulka music ka qalab aad u Lugood Library on your computer oo guji "Si gal" in ay gurmad songs qalab aad si aad u computer. By gujinaya Media, aad galaan suuqa kala guddi gacanta u songs, videos, Podcasts, Lugood, iwm Laga soo bilaabo halkan, aad awoodaan in ay guji "Add" in ay heesaha ku darto qalabka aad, songs dooro in laga saaro qalabka aad, ama u dhoofin in Lugood ama computer aad. Tallaabooyinka la mid yihiin si ay u maareeyaan sawiro iyo videos.
Isku day inaad ugu fiican CopyTrans kale Manager hadda!
SharePod u Mac - Music Transfer iyo ka iPod / iPhone / iPad
Top 9 Phone Transfer Software
Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka PC in hawada iPad
Sida loo saar nuqul iPhoto Photos Si fudud